February 2022 - ApannPyay Media
February 28, 2022 by ApannPyay Media
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အထူး ဂရုပြုရမယ့် အကြောင်းလေးပါပဲ။ အမှတ်မထင်ကနေ အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့် ဒီအကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒါကတော့ ပါရာစီတမောနဲ့ ကော်ဖီ တွဲဖက်ပြီး မသောက်သင့်တဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ။ ဒီအကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ကို့ရဲ့ရစ်လုံးလေး ဆိုတဲ့ အကောင့်က မျှဝေထားတာပါ။ ဥပမာ နဲ့ ကော်ဖီ လုံးဝတွဲမသောက်သင့်ပါ .. အချိန်ခဏလေးပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါနော် ။ ပျင်းလို့ ဆိုပြီးလည်း ကျော်မသွားကြပါနဲ့ ။ သိပြီးသားသူတွေကလည်း မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါနော် အခုပြောပြပေးမဲ့ အကြောင်းရာကတော့ ပါရာစီတမော “Paracetamol” အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပါရာစီတမောကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု မရှိပဲ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နေသူများ များပြားလာပါပြီ … Read more
ခွေးတောက်သည် သလိပ်၊ ချွဲ၊ လည်ချောင်းနာ၊ လေရောဂါ၊ ညောင်းကျနာ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ဒူလာနှင့် ကြွက်အဆိပ်သင့်နာများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ထို့အပြင် ဝမ်းမီးကို ကောင်းစေခြင်း၊ အစာကြေလွယ်စေခြင်း၊ အမျိုးသားအားကို တိုးပွါးစေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် သွေးသားမှန်ကန်စေခြင်းနှင့် စိတ်ရွှင်လန်းစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပုံများ ၁။ ခွေးတောက်ရွက်ကို ဟင်းခွးချက်သောက်ခြင်း၊ ကြော်စားခြင်းဖြင့် လေထိုးလေအောင့်၊ ဆီးချုပ်ရောဂါများ ပျောက်၏။ ၂။ ခွေးတောက်ရွက်ကို ကြိတ်၍ ၄င်းအရည်ဖြင့် ရေယုန်နာကို ဆွတ်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။ ၃။ ထန်းရည်၊ အရက်ကြာရှည်စွာ သောက်သုံးသူများ တစ်နှစ်တစ်ခါ ခွေးတောက်ရွက်ကို ကြက်သားနှင့် ချက်စားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များ ပြေပျောက်စေ၏။ ၄။ အရွက်ကို မီးကင်၍ကပ်လျှင် အနာစိမ်း၊သွေးစုနာများ အနာနုလျှင်ပိန်၍ အနာရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်၍ ပျောက်၏။ ၅။ … Read more
ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်ခါနီးပြီဆိုလျှင် ပြလေ့ရှိသည့် ရှေ့ပြေးနိမိတ် (၇)မျိုး ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးဆိုရင် ပြလေ့ရှိတဲ့ ရှေ့ပြေးနိမိတ် (၇)မျိုး။ တစ်ချို့အိမ်မက်တွေက ရှေ့မှာဖြစ်လာတော့မယ့် အရာတွေကို နိမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေရှိပါတယ် ဒီလိုအရာတွေကို မယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမယ့် အပြင်မှာတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သာဓကတွေအများကြီးရှိပါတယ် ပိုက်ဆံဝင်ခါနီးရင် ဘယ်လိုအိမ်မက်မျိုးတွေ မက်လေ့ရှိလဲဆိုတာကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁=နို့ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် အိမ်မက်ထဲမှာ နို့တွေကိုမက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပျားရည်ကို မက်တာမျိုးကမကြာခင်မှာ ငွေဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်ပါပဲ ဥပမာပျားအုံကြီးကို ပျားရည်ညှစ်တာမျိုး နွားနို့ညှစ်တာမျိုးနို့တွေက လမ်းတွေပေါ်မှာ ဖုံးလွှမ်းနေတာမျိုး အစရှိတဲ့အိမ်မက်မျိုးပါ။ ၂=ရွှေနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ရွှေဆိုတာက ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့ လက္ခာဏာတစ်ခုပါ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရွှေတွေကိုမြင်မက်ရင်လည်း ဒါ ဟာ မကြာခင်မှာ ချမ်းသာတော့မယ်ဆိုတဲ့ ရှေ့ပြေးနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ အိမ်မက်ထဲမှာ နားကပ်ပန်ရတယ်။ လက်စွပ်တွေဝတ်ရတယ်ဆိုပြီး မက်တာမျိုးပါ အဲ့လိုမက်နေပြီဆိုရင်တော့ … Read more
မကြာခဏ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ၆ နေရာ
February 27, 2022 by ApannPyay Media
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တချို့အစိတ်အပိုင်း နေရာတွေက မကြာခဏ ဆေးကြော သန့်စင်ပေးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိနေရာတွေကို လုံးဝ (သို့မဟုတ်) အကြိမ်ရေအနည်းဆုံးသာ ဆေးကြောပေးပါ။ ၁။ နား အမှန်တကယ် အားဖြင့် နားအတွင်းမှာရှိတဲ့ နဖားချေးတွေက အညစ်အကြေးနှင့် အပျက်အစီးများကို သန့်စင်ဖယ်ရှား ပေးနေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနဖားချေးတွေကို ဖယ်ယူ ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါ နားကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်တော့သလို ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်များကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး နားကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊ ကလော်ခြင်းများ မပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ၂။ ဆဲလ်သေများ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့လျှှင် မျက်နှာကို ၂ကြိမ်သစ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် နေ့စဉ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မျက်နှာကို ပွတ်တိုက် ဆေးကြောခြင်းမျိုးတွေကို မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာ ဆဲလ်သေများကို … Read more
အချစ်ကိုက်ခံရ လို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အညို အမည်းကွက် တွေ အမြန်ကွယ်ပျောက်ဖို့ နည်းလမ်းများ
ချစ်သူ နဲ့ ချိန်းတွေ့ကြတဲ့အခါ အနည်းဆုံးတော့ အနည်းပွင့်လေးတွေ ခြွေကြမှာပါ။ ချစ်သူ ရဲ့ လည်တိုင်၊ ချစ်သူရဲ့ ပါးပြင်၊ ချစ်သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ အနမ်းပန်းတွေ ခြွေစိုက်ရာ မဟာပထဝီမြေကြီးတွေပါဘဲ။ ဒီတော့ အညိုကွက်ကြီးတွေ ထင်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ချို့ကကျတော့ ချစ်သူကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် တွေ့ရတာမို့ ဒီအညိုကွက်ကြီးတွေဟာ ဟင်းခိုးစားတဲ့သူရဲ့ မျက်နှာ အိုးမည်းပေနေသလို ရိုက်မေးစရာမလိုပဲ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအညိုအမည်းကွက်ကြီးတွေ အမြန်ကွယ်ပျောက်ဖို့ Shwemom ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရေခဲအုပ်ပေးပါ အညိုအမည်းစွဲနေတဲ့ နေရာကို ရေခဲ၊ သို့မဟုတ် အအေးခံထားတဲ့ ငွေအကြွေစေ့၊ ဇွန်း၊ ပုဝါ စသည်တို့နဲ့ အကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက် ကပ်ပေးပါ။ တစ်ခါကပ်တိုင်း စက္ကန့် 30 လောက် ကြာပါစေ၊ အမှန်က … Read more
မိဘတွေကို မပြောသင့်သော စကား (၁ဝ)ခွန်း
လူတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘတွေကို အောက်ကစကားဆယ်ခွန်းထဲက တစ်ခွန်း ဒါမှမဟုတ်…တစ်ခွန်းထက်ပိုပြောခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။သားသမီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က မိဘတွေကိုဒီစကားတွေကိုထပ်မပြောတော့ဘဲ နားလည်ပေးကြရအောင်…..လူ့ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နံဘေးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ချစ်သူခင်သူ၊သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားမှ သူတို့က သင့်ဘဝမှာဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း သိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ မိဘတွေကို ရိုသေလေးစားပါ။သင် ဘာအမှားပဲလုပ်လုပ်.. သူတို့က သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။မိဘရဲ့ရင်ခွင်ဟာ… သင့်အတွက် လေငြိမ်ရာအရပ် ထာဝရနားခိုရာ ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အင်းပါ! အင်းပါ! သိပြီ…၊ အရမ်းရှုပ်တာပဲ! (၂) ကိစ္စရှိသေးလား? မရှိရင် ဖုန်းချတော့မယ်!မိဘတွေဖုန်းဆက်တာ စကားပြောချင်ရုံသက်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုချဖို့ပဲ မလောပါနဲ့ (၃) ပြောရင်လည်း နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့! (၄) မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထပ်ထပ်ပြောထားရက်သားနဲ့….. လုပ်ထားတာတွေကလည်း မကောင်းဘူး။သူတို့အင်အားနဲ့မမျှတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ဂရုတစိုက်နဲ့ သူတို့ကိုမလုပ်ဖိုတားတယ်။ဒါပေမဲ့… … Read more
မြန်မာနိုင်ငံမှာ .. ငါးပုဇွန် အလွန်ပေါ ပါတယ် ..ရေခဲ ရိုက်ဖို့ ရေခဲ မဝယ်ချင်လို့ .. မပုတ်အောင် ဖော်မလင်သုံးတာက .. တစ်ပိုင်းပေါ့ ..အဲ .. ပြောချင်တာက .. ဒီပုဇွန် …ေ စျးသယ်တွေက .. ချောင်းသာ ပုဇွန်လို့ လိမ်ရောင်းတယ် .. ချောင်းသာက လာတာ မဟုတ်ဘူး … နိုင်ငံခြားကနေ .. ရေခဲပုံးတွေနဲ့လာတာ .. စားသောက်ဆိုင်တွေ .. အဓိက သုံးတယ် …မြန်မာ FDA မသိဘူးလား … မသိပါဘူး … စားသုံးသူတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဆိုတာ .. နှစ် ၆၀ လုံး .. လုပ်မလာခဲ့ပါဘူး …နိုင်ငဲခြားကနေ ရန်ကုန်ထိ … Read more
ကော်ခွက်တွေမှာ တွေ့နေကျဖြစ်သော အောက်ခြေမှ တြိဂံလေးထဲက ဂဏန်းများ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်များ
ကော်ခွက်တွေမှာ တွေ့နေကျဖြစ်သော အောက်ခြေမှ တြိဂံလေးထဲက ဂဏန်းများ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်များ အိမ်ကခွက် တွေဖင်လှန်ကြည့်လိုက်ပါ ၊ ပလပ်စတစ် အသုံးအဆောင်တွေကို ရည်ရှည်သုံးမယ် / အကြိမ် ကြိမ်ထည့်မယ် /သုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင် ဖင်ကိုသာလှန် ကြည့်လိုက်ပါ ။ အောက် ခြေတစ်နေရာ မှာအထူးသဖြင့် ဖင်မှာတြိဂံ လေးထဲမှာ 1 က နေ7အထိ ဂဏန်းတစ်လုံးနဲ့ စာ ၂ လုံး ၊ ၃ လုံးပါတာကို တွေ့ရပါမယ် ၊ အဓိပ္ပါယ်တွေကတော့ 1 ဆိုရင် ( PET or PETE ) သုံး တဲ့ပလတ်စတစ် အမျိုးအစား ပါ၊ သူကတစ် ခါ ပဲသုံးလို့ရပါတယ် ၊ … Read more
ေ လမဖြတ်​ဘူးဆိုလို့ `မ´ လာတာ
ေ လမဖြတ်​ဘူးဆိုလို့ `မ´ လာတာ သေတဲ့ထိလေမဖြတ်ဘူးတဲ့နော် …မိဘဆွေမျိူးတွေကို ပြောပြလို့ရအောင် မြန်မြန်ရှယ်ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ ၁။ ဆင်တုံးမနွယ်အစို လက်တစ်ညိုတစ်ဆစ်ဖြတ် (ငါးကျပ်သားခန့်) ကို ၄ ခြမ်းခွဲပြီးထည့်ပါ။ ၂။ ရေကျက်အေး သို့ သောက်ရေသန့် (ငှက်ပျောဖူး ပုလင်း ၂ ပုလင်း) (1.5 L) ၃။ ဆားတစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်းအသေး) (ဆားများပါက သွေးတိုးသမားများအတွက် မကောင်းပါ။) ၄။ ထန်းလျက် (ငါးကျပ်သား) (ထန်းလျက်မပါ ပါက ကြာကြာထားမခံပါ။ ပုတ်လွယ်သည်။) ၅။ ရှောက်နူသီး ခေါ် ရှောက်ဘီလူးသီး ၂ လုံး (ရှောက်တွတ်သီးဟုလည်းခေါ်) ထို ၅ မျိုးကိုရော၍ အဖုံးလုံသော ဖန်ပုလင်း သို့ ကိုကာကိုလာဗူးအမာများတွင် (ရေဗူးအပျော့တွင် ပေါက်ထွက်နိုင်) တစ်ပတ်တိတိပိတ်ထားပြီး … Read more
နတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်နေရင် သိနိုင်မယ့် နိမိတ် ၅ မျိုး
နတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်နေရင် သိနိုင်မယ့် နိမိတ် ၅ မျိုး တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံရသူပါ။ (၁) ငှက်မွှေးလေးကျလာတယ် တကယ်လို့သင့်အနားလေးမှာ ငှက်မွှေးလေးဝဲနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အပေါ်လေးကိုကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘေးမှာ သူတို့အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်လို့ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာသင့်ကို ချစ်ခင်တယ်၊ မစတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သမရိုးကျနေရာတွေမဟုတ်တဲ့ ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းလိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာ တွေ့ရင်တော့ ပိုလို့တောင်သေချာပါတယ်။ (၂) ၁၁း၁၁ နာရီ ၁၁း၁၁ နာရီကို … Read more